Umuntu ngamunye ubhekene inkolelo yokungafi kokuthatha umhlalaphansi. Ngenxa yalesi sizathu kubalulekile ukwazi ukuthi kufanele kube athathe umhlala-phansi. Abesifazane Russian hamba ngeholide ngaphambili kunabantu, naphezu kweqiniso lokuthi, ngokusho izibalo, i-ukuphila kuqala isikhathi eside kunaleso yesibili iminyaka eyishumi.
Eminyakeni engaphezu kwengu-ayisishiyagalombili edlule, imisiwe engu umhlalaphansi kwabesilisa nabesifazane, ngesisekelo okuyinto okukhiphayo uya aphumule 60 futhi 55 amalitha. ngokulandelana. Kusukela ngaleso sikhathi, imikhawulo yobudala awashintshiwe.
Akunjalo kudala uhulumeni ezihlongozwayo ukushintsha yobudala yokuthatha umhlalaphansi. Lokhu kungenxa yokuthi cishe njalo impesheni lwesithathu uyaqhubeka esebenza ngemuva kokuthatha umhlalaphansi. Ngenxa yalesi sizathu, uhulumeni ezihlongozwayo ukushintsha engu ukunika amandla abantu ukusebenza isikhathi eside nezinzuzo zazo siqu.
Ngo-2017, ngineminyaka engu umhlalaphansi eRussia ayiguquki njengoba kwakunjalo ngesikhathi eSoviet Union: abesifazane ukuqhubeka eholidini e 55, futhi amadoda - e 60. Nokho, izinguquko ezithile yethulwa kulo nyaka. Zonke izakhamuzi abathintekayo umphakathi, kumele umhlalaphansi kamuva.
Umnyaka umhlalaphansi eRussia kuncike hlobo nabesifazane abaqashwe izibonelelo nezimo zokusebenza. Uma owesifazane esebenza empilweni bokwenza umsebenzi oyingozi, angakwazi umhlalaphansi ngaphambi.
Ukuze sifinyelele kweminyaka esemthethweni umhlalaphansi, kufanele futhi ube isipiliyoni ezifanele. Ngaphansi komthetho omusha ngo-2025 ubuncane bobude kufanele kube 15 amalitha.
An emisha kwaba ukwethulwa uhlelo amaphuzu. Ngokuya ngalolu hlelo uhulumeni, abesifazane uzokwazi umhlalaphansi ngineminyaka 55 uma banayo amaphuzu 30 futhi 15 amalitha ngo-2025. nakho.
Lezi zinkomba nganquma ukukhuluma kancane kancane unyaka ngamunye futhi isibalo isikhathi amaphuzu. Kulo nyaka, ubude obuncane iminyaka eyisishiyagalombili, futhi inani lamaphuzu - 11. Ngonyaka olandelayo, isipiliyoni kumele kube iminyaka eyisishiyagalolunye.
Ubudala ngokufaka umhlalaphansi eRussia e amadoda angaphezu kwamashumi kwabesifazane. Ngaphansi komthetho wamanje, ubulili namandla Unelungelo ukucela impesheni eneminyaka engu 60. Kulokhu, imigomo kokuqokwa komkhandlu izinkokhelo cishe kuyafana abesifazane.
Ukushintsha yobudala yokuthatha umhlalaphansi
Kule minyaka embalwa edlule, zonke izakhamuzi nesithakazelo kuyi-okwandisa engu umhlalaphansi. Muva nje, isiphakamiso kahulumeni lizwakalise isidingo ukukhulisa engu umhlalaphansi eRussia kuze kufinyelele 65. Nokho, ukwanda okukhulu kwezincwadi ngeke. Ngamagama wezinguquko impesheni - ukwenyuka kancane engu labantu ukuya ngeholide. Imithetho emisha zisebenza bakahulumeni. Kulabo abasebenza kwezinye izindawo, umkhawulo yobudala izohlala ezingeni elifanayo.
Ukushesha kokutholakala lonke abesifazane
Ukuze abesifazane, uma umhlalaphansi. Izinzuzo liyatholakala kubo bonke:
Wachitha iminyaka eyisikhombisa ku eziyingozi. Kulokhu, abesifazane ungaya ukuphumula kahle sifaneleka eneminyaka engu-45 ngo-khona Experience iminyaka 7.
Lapho ufika eminyakeni engu-50 owesifazane angaya impesheni uma engazala izimo zokusebenza ezinzima lapho abasebenza ezokuthutha ujantshi ezitimeleni, kanye nalabo baletha izingane 8 noma ngaphezulu.
50 ungashiya labo banezingane ezimbili noma ngaphezulu, futhi uye wasebenza iminyaka okungenani 12 ngaphansi COP noma iminyaka engu-17 kule ndawo bayalingana iCOP.
Uma umhlali owesifazane eNyakatho Ekude yeCanada, wafike wahlanganyela reindeer ezaziphila ngokufuya, yobudala umhlalaphansi kuziwa 45.
Umnyaka umhlalaphansi eRussia eNyakatho Ekude yeCanada lihlukile evamile. Esinye nesinye isakhamuzi, ukusebenza ezimweni ezinjalo, ungathembela izinzuzo.
Unyaka isikhathi wasenyakatho 9 izinyanga wokusebenza ngaphansi ncamashi COP. Lapho kudingidwa isikhathi iminyaka engu-15 ungaya ngeholide. Kule nkathi yama-isakhamuzi kufanele kube 45 nengu-50 ngokulandelana kwabesilisa nabesifazane. Nokho, ezinye izinhlobo imvume yokusebenza ukuya eholidini ngaphambi umnqamulajuqu (abesifazane 40, amadoda engu-45), uma umsebenzi wabo zabasebenzi elihlobene ne abantu ezingozini zempilo.
Ubudala ophumayo impesheni lempi
Ngo wodwana yakhipha ngamasosha. Elithuthukile imibandela ayezosebenza ngaphansi kwayo umhlalaphansi.
Umnyaka umhlalaphansi eRussia indoda akuxhomekile nje kuphela esimweni obuphelele enkonzo, kodwa futhi title yayo. Admirals, ojenene colonels, umhlalaphansi eneminyaka engu-65. Eminyakeni emihlanu ngaphambi kwalokho kungathatha ezinye okufanele, uMajor General futhi engemuva Admiral. Colonels nezinduna hamba umhlalaphansi ngineminyaka engu-55. Ezinye izindaba zika-amasosha Unelungelo ukusebenzisa ukuqokwa izinzuzo eneminyaka engu-50, kodwa lezi zimiso zisebenza kuphela amadoda. lempi Female Unelungelo ukuya ngeholide eminyakeni 45.
Nokwanda umhlalaphansi emsebenzini umphakathi angaya abantu ubudala usukhule kakhudlwana, njengoba izinguquko umthetho impesheni kwathinta engu candidates for izikhundla evulekile. Ngokwesibonelo, ungakwazi manje athathe Wabasaqalayo inkonzo yesivumelwano kungekho nakho lapho eneminyaka engu-30 iminyaka. Eminyakeni engaphezu kwengu-20 ka empini umuntu okwenzayo ukuze uthole isipiliyoni ezidingekayo futhi buthule hamba ngeholide.
Estate - Iyini? Incazelo kanye nezinhlobo impahla: nezinqe ingenakunyakaziswa isimo, kamasipala, ezinkampani siqu
Zizinikezele efulethini: izindleko wokulungisa izivumelwano, imibhalo
Delicious Muffin okuzenzela (tinhlobo letehlukene temisho): indlela yokwenza?
Indlela siyamba igolide: amathiphu kanye namathuba
Ihhotela ePharadesi Holiday Village 3 * (Sri Lanka, Negombo): ukubuyekezwa, izincazelo kanye nokubuyekeza
Izimpawu Fire ingozi: nezidingo namazinga
Star umculo emhlabeni Merayya Keri: Biography, imisebenzi kanye nemindeni
Indlela ukupheka pie amajingijolo. Ungadliwa ehla futhi ngaphandle
"Turboslim" (ibha): ukubuyekezwa kanye Ukwakheka
Ubani igama lakhe langempela? Germiona Greyndzher?